सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडानलाई अनिवार्य गरिँदै, ३६ सयसम्म शुल्क - Kohalpur Trends
सवारीमा इम्बोस्ड प्लेट जडानलाई अनिवार्य गरिँदै, ३६ सयसम्म शुल्क
६ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सबै सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको जडानलाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । अब सवारीको क्रमैसँग लट नम्बर तोकेर पुराना सवारीमा अनिवार्य जडान गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ नम्बर प्लेट लिने सवारीलाईपनि यही प्लेट जोड्नुपर्ने व्यवस्था निकट भविष्यमै गरिनेछ ।
पटक-पटकको विवाद र बहसपछि विभागले माघ महिनाबाट फेरि सवारीमा स्वेच्छिक रुपमा इम्बोस्ड प्लेटको जडान सुरु गरेको थियो । सरकारी नम्बर प्लेटका सवारीलाई भने विभागले चैतसम्म इम्बोस्ड प्लेट जोडिसक्न समयसीमा दिएको छ ।
अब इम्बोस्ड प्लेटको जडानलाई गति दिन नामाकरण भइसकेका प्रदेशहरुमा अनिवार्य गर्ने तयारी अघि बढाइएको हमाफले बताए । अहिलेसम्म बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामाकरण भइसकेको छ । प्रदेश १ र २को नामाकरण भने टुंगिन बाँकी छ ।
गाडीको अगाडिको प्लेट
Previous Previous post: जान्नुहोस्, एउटै गोत्र भएकासँग विवाह किन गर्न हुँदैन? विवाह गर्नको लागि कति गुण मिल्नुपर्छ?
Next Next post: राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र जापानी राजदूतबीच भेटवार्ता